မရှိလို့လုပ်စားရတဲ့ ပြည့်တန်ဆာတွေအပေါ် ဂုဏ်သွေးစုပ်နေတဲ့ စားဘဲကြီးအကြောင်း – Cele Lover
မရှိလို့လုပ်စားရတဲ့ ပြည့်တန်ဆာတွေအပေါ် ဂုဏ်သွေးစုပ်နေတဲ့ စားဘဲကြီးအကြောင်း
ရန်သူမျိုး ငါးပါးထဲမှာ ဒီလူကြီးပါနေတယ်ရှင် ………. မိထီလာမြို့.. ကျမှတို့ ပြည်သာယာ(မြောက်) .. ရက်ကွက်မှာ (ပြည့်တန်ဆာ) လုပ်ငန်းလုပ်နေသူ (၅) ဦးခန့်ရှိပါတယ် …
ဒီအထဲမှာ လုပ်ကိုင်သူ မိန်းကလေးဦးရေး (၇၀)ခန့် ရှိပါတယ် ကျမတို့ရဲ့ လုပ်အားခတွေကို ပြည်သာယာရပ် အမှတ် (၃) ရဲစန်းမှ … နယ်ထိန်းခေါင်းဆောင် ဒုရဲအုပ် .. ဘီလူး (ခေါ်) သိပ္ပံအား (၁၅) ရက် တစ်ပတ်လျှင် ၎င်းအတွက် (၇၀၀၀၀) ကျပ်နှင့်
သီးကုန်း free စားသောက်ဆိုင်တွင် လာရောက်နားခိုသော လူကြီးများ ဧည့်ခံရန်အတွက် (၁၅) တစ်ပတ်လျှင် ငွေ (၃၀၀၀၀) ကျပ် စုစုပေါင်း တစ်လလျှင် ဒုရဲအုပ် သိပ္ပံအား တစ်ဦးလျှင် (၂၀၀၀၀၀) ကျပ်ပေးဆောင်ရပါသည် လုပ်ကိုင်သူ ငါးဦးခန့်ရှိပါသည် ငါးဦးဆိုလျှင် ၎င်းအား (၁၀) သိန်းကျပ် ပေးဆောင်ရပါသည်
ဒါပေမယ့် ရခုရက် အနည်းငယ်ရက် အတွင်းမှာ ကျမတို့တွေ ပိတ်ထားရပါသည် ထိုးရက်အတွင်းမှာပါပဲ ကျမတို့ကို ဘီလူး(ခေါ်) ဒုရဲအုပ် သိပ္ပံမှ ဝင်ရောက် ဖမ်းဆီးဟန် ဆောင်ခဲ့ပီး (ပြည့်တန်ဆာ) ပုဒ်မနဲ့ အရေးယူခံချင်လား ဒါမှမဟုတ် (၁၈၈) ပုဒ်မနဲ့ အရေးယူခံချင်လား
(၁၈၈) ပုဒ်မနဲ့ဆိုရင် ဒဏ်ငွေရိုက်ခံရမယ် ထေင်မကျဘူးလို့ပြောပါတယ် (၁၈၈) ပုဒ်မနဲ့စွဲမယ်ဆိုရင် သူ့အတွက်ငွေ (၃သိန်းကျပ်) ပေးရပါတယ် ဒါပေမယ့် ကျမတို့ ကုန်ကျငွေ (၁၈)သိန်းခန့် ကုန်ကျပါတယ် .. ကျမတို့ဆီက လိုင်းကြေးတွေယူပီး စားနေတဲ့ ဘီလူ း(ခေါ်) ဒုရဲအုပ် သိပ္ပံအား သက်ဆိုင်ယာ လူကြီးမင်းတို့မှ အရေးယူ ဆောင်ရွက်ပေးစေလို့ပါတယ်ရှင်
မှတ်ချက်…၎င်းမှ ကျမတို့အား ငွေမပေးရကြောင်း ချိန်းချောက်ပီး ပြောဆိုခိုင်းမှာ သေခြာပါတယ် …… ပြည်သူလူထု အားလုံးကို ချိန်းခြောက် တောင်းစားနေတဲ့ ဘီလူး (ခေါ်) ဒုရဲအုပ် သိပ္ပံအား အများသိရှိရန် တင်ပြအပ်ပါသည်…..ပြည်သာယာမြောက် မဆုခိုင် … များများshareပေးပါရှင့်
မရွိလို႔လုပ္စားရတဲ့ ျပည့္တန္ဆာေတြအေပၚ ဂုဏ္ေသြးစုပ္ေနတဲ့ စားဘဲႀကီးအေၾကာင္း
ရန္သူမ်ိဳး ငါးပါးထဲမွာ ဒီလူႀကီးပါေနတယ္ရွင္ ………. မိထီလာၿမိဳ႕.. က်မွတို႔ ျပည္သာယာ(ေျမာက္) .. ရက္ကြက္မွာ (ျပည့္တန္ဆာ) လုပ္ငန္းလုပ္ေနသူ (၅) ဦးခန႔္ရွိပါတယ္ …
ဒီအထဲမွာ လုပ္ကိုင္သူ မိန္းကေလးဦးေရး (၇၀)ခန႔္ ရွိပါတယ္ က်မတို႔ရဲ႕ လုပ္အားခေတြကို ျပည္သာယာရပ္ အမွတ္ (၃) ရဲစန္းမွ … နယ္ထိန္းေခါင္းေဆာင္ ဒုရဲအုပ္ .. ဘီလူး (ေခၚ) သိပၸံအား (၁၅) ရက္ တစ္ပတ္လွ်င္ ၎အတြက္ (၇၀၀၀၀) က်ပ္ႏွင့္
သီးကုန္း free စားေသာက္ဆိုင္တြင္ လာေရာက္နားခိုေသာ လူႀကီးမ်ား ဧည့္ခံရန္အတြက္ (၁၅) တစ္ပတ္လွ်င္ ေငြ (၃၀၀၀၀) က်ပ္ စုစုေပါင္း တစ္လလွ်င္ ဒုရဲအုပ္ သိပၸံအား တစ္ဦးလွ်င္ (၂၀၀၀၀၀) က်ပ္ေပးေဆာင္ရပါသည္ လုပ္ကိုင္သူ ငါးဦးခန႔္ရွိပါသည္ ငါးဦးဆိုလွ်င္ ၎အား (၁၀) သိန္းက်ပ္ ေပးေဆာင္ရပါသည္
ဒါေပမယ့္ ရခုရက္ အနည္းငယ္ရက္ အတြင္းမွာ က်မတို႔ေတြ ပိတ္ထားရပါသည္ ထိုးရက္အတြင္းမွာပါပဲ က်မတို႔ကို ဘီလူး(ေခၚ) ဒုရဲအုပ္ သိပၸံမွ ဝင္ေရာက္ ဖမ္းဆီးဟန္ ေဆာင္ခဲ့ပီး (ျပည့္တန္ဆာ) ပုဒ္မနဲ႔ အေရးယူခံခ်င္လား ဒါမွမဟုတ္ (၁၈၈) ပုဒ္မနဲ႔ အေရးယူခံခ်င္လား
(၁၈၈) ပုဒ္မနဲ႔ဆိုရင္ ဒဏ္ေငြ႐ိုက္ခံရမယ္ ေထင္မက်ဘူးလို႔ေျပာပါတယ္ (၁၈၈) ပုဒ္မနဲ႔စြဲမယ္ဆိုရင္ သူ႔အတြက္ေငြ (၃သိန္းက်ပ္) ေပးရပါတယ္ ဒါေပမယ့္ က်မတို႔ ကုန္က်ေငြ (၁၈)သိန္းခန႔္ ကုန္က်ပါတယ္ .. က်မတို႔ဆီက လိုင္းေၾကးေတြယူပီး စားေနတဲ့ ဘီလူ း(ေခၚ) ဒုရဲအုပ္ သိပၸံအား သက္ဆိုင္ယာ လူႀကီးမင္းတို႔မွ အေရးယူ ေဆာင္႐ြက္ေပးေစလို႔ပါတယ္ရွင္
မွတ္ခ်က္…၎မွ က်မတို႔အား ေငြမေပးရေၾကာင္း ခ်ိန္းေခ်ာက္ပီး ေျပာဆိုခိုင္းမွာ ေသျခာပါတယ္ …… ျပည္သူလူထု အားလုံးကို ခ်ိန္းေျခာက္ ေတာင္းစားေနတဲ့ ဘီလူး (ေခၚ) ဒုရဲအုပ္ သိပၸံအား အမ်ားသိရွိရန္ တင္ျပအပ္ပါသည္…..ျပည္သာယာေျမာက္ မဆုခိုင္ … မ်ားမ်ားshareေပးပါရွင့္
Previous Article လေဖြတ်လူနာ ၆လ လောက် စွဲပြီးသောက်ရင် အကောင်းအတိုင်းပြန်ဖြစ်လာစေတဲ့ ကိုယ်တွေ့ဆေးနည်း
Next Article မြန်မာ နိုင်ငံတွင် Twitter နှင့် Facebook နှင့် Instagram သုံးစွဲခွင့်မရစေရန် စစ်ကောင်စီ မရမက ကြိုးပမ်းနေ